Guluf ballaaran oo ka dhan ah Tigrayga oo ka socdo dalka Itoobiya | Universal Somali TV
Abaabul xoog leh oo ciidan ayaa ka socdo qaybo ka mida dalka Itoobiya, si mar kale loo hujuumo jabhadda Ururka TPLF ee Tigrayga oo lagu eedeeyay inaanay tixgelin xabad joojintii halka dhinac ahayd, ee ay 28-kii bishii June ku dhawaaqday Xukuumadda Addis Ababa.
Abaabulkan ayuu xoogiisu ka socdaa Gobolada Amhara, Oromia iyo Sidama, waana guluf ka duwan midkii bishii November ay Militariga Federaalka ku qaadeen Maamulkii Gobolka Tigray, iyadoona markaan la weerari doono waxa loogu yeeray haraadigga TPLF.
Maamulka Gobolka Amxaarada ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah jabhadda Tigrayga. Maamulka ayaana askarta hawlgabka ah iyo maleeshiyada gobolkaasi ugu yeeray inay ka qayb qaataan gulufka socdo.
Xiisadda ka soo cusboonaatay dalkaasi ayaa ifbaxday, ka dib markii maleeshiyada Tigrayga ay la wareegeen gacan ku haynta Magaalooyinka Korem iyo Alamata, oo markii hore uu ka arriminayay Maamulka Amxaarada.
Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto TPLF, haddii ay jebiyeen xabad joojinteedii ay dowladdu ku dhawaaqday daba-yaaqadii bishii hore ee June.
"Waan iska difaaci doonnaa, iskana caabin doonnaa weeraradan ay nagu hayaan cadowgeena gudaha iyo dibaddaba, iyadoo laga shaqeynayo sidii loo dadajin lahaa gurmadka bani'aadanimo." Ayuu yiri Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed.
Tani ayaa carqaladayn karta howlaha gurmadka bani'aadamimo ee la doonayo in gargaarka lagu gaarsiiyo boqolaal kun oo qof, oo ku nool gobolka waqooyiga Itoobiya dhaca ee la sheegay inay qarka u saaran yihiin in macluul ugu dhintaan gobolkaasi.
Kan-xigaDowladda Koonfur Afrika oo kordhisay ...
Kan-hore72 qof oo ku dhintay rabshadaha ka so...
Tigrayga oo shuruudo ku xiray xabad joojinta loogu baaqay
61,462,993 unique visits